ဆက်သွယ်ရန် RSS Feeds
Let my country start the pilgrimage to Panglong – Peace is the only way
MERCY - THE ROAD MAP FOR PERSONAL PEACE AND WORLD PEACE.
Radio Veritas Asia (RVA) Karen Service,alegacy of Archbishop Mahn Gaby
Wold Social Communications Day
4th World Apostolic Congress on Mercy ၃ ရက်တာ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
ခရစ်စမတ်စ် အကြို ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ညစာစာခြင်း
Archbishop House Press Release/ Yangon: Myanmar- "Peace is the Cry from the Manger - Is the World listening?" Christmas Message of Hope and Peace to People of Myanmar by Cardinal Charles Bo, 12 December, 2016!
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ကာဒီနယ်အသစ်များခန့် အပ်သော မစ္ဆားတရားတော်တွင် သြ၀ါဒမြွက်ကြား ခြင်း Let the holy Doors Close – let the Human hearts remain open with mercy The Extra ordinary Jubilee of Mercy comes to an end today.
Archbishop House Press Release/ Yangon: Myanmar- "Economic and Environmental Justice" A Speech delivered By Cardinal Charles Bo ataConference for Myanmar's Resource Wealth, 15 November, 2016!
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယားကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ မိုးကုတ်စက်ဝန်းကိုချဲ့ ထွင်နိုင်ရန်အတွက် အာဒ်ဝင်ကာလက ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်ပိတ်ပွဲအတွက်ကြိုးပမ်းဆက်ကပ်သူများအား ပုပ်ဖရန်စစ်ကျေးဇူးတင်ခြင်း
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဆိုင်သော ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး ၃ ကျောင်းမှ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များ ပိတ်လိုက်ပြီဆိုခြင်း ဗာတီကန်အတွက်၂၀၁၆ ခရစ္ဆမတ် သူငယ်တော်အိမ်နှင့် ခရစ္ဆမတ်သစ်ပင်ရောက်ရှိလာတော့မည်